The Flash Drive Kaadị azụmahịa | Martech Zone
Friday, February 1, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’gụọ blọgụ a obere oge, ịmara na m bụ ọkpọ ọkpọ maka teknụzụ… na kaadị azụmaahịa. Mgbe ọ bụla m zutere mmadụ ma nye m kaadị, ana m atụ egwu. Yesnyaahụ, m zutere Rob Bacallao si Nkọ ndị ọrụ o wee nye m ịma mma a:
The Wafer flash mbanye kaadị azụmahịa si Flashbay dị mma - na-abịa na 2Gb, 4Gb, 8Gb na 16Gb, nke a bụ nkọwa dị n'ịntanetị:
Wafer USB Card bu otu n’ime kaadi nke kachasi nke uwa n’uwa n’enwe oke nkpa 2.2mm. Akụkụ abụọ nke Kaadị USB nwere ike ịbụ foto zuru ezu edepụtara na agba agba zuru ezu. Nnukwu mpaghara a ma ama ga-ahụ na akara ngosi gị pụtara oke ama - ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ ịnyefe usoro zuru oke iji kpuchie kaadi USB niile karịa akara ngosi. Kaadị USB weghaara nke ọma n'ime akpa gị, obere akpa ma ọ bụ onye nhazi ma were obere oghere.
O yiri ka m bụrụ onye na-ese vidio, M ga-azụ igbe nke ihe ndị a iji tụlee ụfọdụ ihe atụ!
Tags: kaadị azụmahịaflash kaadị azụmahịaflashbayflashdriveTechkaadị wafer
Feb 1, 2013 n’elekere 11:03 nke abali
Nkọ. Nke ahụ gaara adị mma 5 afọ gara aga, mana ugbu a, echere m na njikọta na YouTube ma ọ bụ Vimeo ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị.
Feb 1, 2013 n’elekere 11:10 nke abali
Ma dị ọnụ ala karịa…. ma ọ bụghị dị ka jụụ! 🙂
Feb 2, 2013 n’elekere 11:32 nke abali
Kachasị ndị ahụ na ndị kọntaktị gị kachasị mma. Ha na-efu n'etiti $ 7 na $ 10 / nke ọ bụla.
Feb 2, 2013 na 7:29 PM
Ihe niile gbasara nloghachi… mana ha dị oke ọnụ.